Famerenana akaiky - Famakiana psychic an-tserasera
Hevitra misimisy kokoa amin'ny Internet > Keen Review
tenaNy tranokalan-tranonkala dia mirehareha amin'ny 1000 an'ny "psychic voamarina" fa ny zavatra mahatsikaiky momba izany dia tsy misy amin'ireo psikika ireo no nohamarinin'ny olona. Keen dia an'ny orinasa telefaona AT&T. Izay rehetra miantso ny tenany ho psykika dia afaka miditra ary manomboka manambola amin'ny mpanjifa tsy miahiahy. Tsy misy fizotran'ny fizahana na fanamarinana. Ny psychics dia mandoa vola Keen.com hasongadina ao amin'ny tranonkalany, ary omena nomeraon-telefaona Keen. Tsara i Keen taloha, nefa tato ho ato dia feno mpanolotsaina saina vaovao sy efa za-draharaha izao ny lahatahiry ataon'izy ireo. Tena tsy afaka manoro an'i Keen intsony aho. Voahitsakitsaky ny be loatra antsoina hoe psychika aho. Raha mitady torohevitra tena izy ianao dia manoro hevitra anao aho mba tsy i Keen. Aza manantena ny hamerina ny volanao raha mahazo mamaky ratsy koa ianao .. Tsy azoko mihitsy izany.
tena.com dia 10 taona lasa izay no nanorenan'ny psychic iray tena izy. Vao tsy ela akory izay dia namidin'ny tompony tamin'ny AT&T, ilay orinasan-telefaona, ary nivarina nianjera izy ireo nanomboka tamin'izay, ka hatramin'izao dia tsy misy dikany amiko raha ny hevitro. Tsara ny rafi-pitsikilalan'izy ireo saingy tsapako fa mora voahodina izy io.
tena dia tsy misy fandaharam-pitsikilovana ho an'ny psychic. Manana fepetra sasantsasany izy ireo rehefa manoratra ny psychic fa tsy manamarina ny maha-azo antoka azy. Ny antony mahatonga ny Keen ho matihanina kokoa noho ny hafa rehetra dia satria izy ireo dia hamela olona be dia be ho an'ny mpamaky.
tena nanavao ny tranokalan'izy ireo vao haingana mba hahatonga azy io ho sariaka kokoa. Tiako ilay endrika vaovao ary hitako fa tena mora ny nitodika tany ary haingana ny mamaly. Ny fahitana psychic sy fandaharana famakiana miaraka amin'izy ireo dia tsotra. Mampalahelo fa voafitaka na diso tafahoatra ireo mpanolotsain'izy ireo ara-tsaina.
tena Manolotra maimaimpoana 3 ho an'ny mpanjifa vaovao. Tsy maintsy manoratra ianao, manome karatra fiara ary mividy minitra fanampiny mba hahazoana ny minitra 3 maimaimpoana na izany aza. Nahita ny 3 minitra nandeha haingana aho ary nandany azy rehetra fotsiny dia nitady ny hahita fahatsapana ara-tsaina. Ny Keen no manana ny ratsy indrindra amin'ny mpanjifa ratsy indrindra amin'ny serivisy rehetra amin'ny aterineto.
Azoko antoka tsara tena tsy manana departemantan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Farafaharatsiny mba tsy nahazo olona velona aho hamaly. Nahazo mailaka valiny mandeha ho azy maro be aho milaza amiko fa hifandray tsy ho ela ny fanohanana nefa tsy nahazo karazana fifandraisana mihitsy aho. Tsy manome fanohanana an-tariby fotsiny i Keen.